မီနီ ၀က်သားပြားကြော် | Wutyee Food House
« ပင်လယ်စာ ဂေါ်ဖီရွက်ထုပ်ဟင်း
နှစ်သစ်အမှတ်တရ ဟင်းရွက်စုံခေါက်ဆွဲကြော် »
December 21, 2010 by chowutyee
မီနီ ၀က်သားပြားကြော်ဆိုတာ အလတ်စားအရွယ် (mini) ၀က်သားပြားကြောလေး တွေမို့ပါ။ ဒါက အနောက်တိုင်းစတိုင် ချက်ပြုတ်နည်း ဆိုပေမယ့် ချက်ရလွယ်ပြီး အရသာကလည်း လူတိုင်း အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ ဒီ မီနီ ၀က်သားပြားကြော်ကို Mustard (သို့) Mayonnaise နဲ့တွဲဖက်ပြီ စားလျှင် အလွန်ကို လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ချက်နည်းလေး ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
၁။ ၀က်သား (Pork)- ၁၅ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
၂။ ကြက်သွန်နီ (Onion)- ၂ဥ ( နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၃။ ကြက်ဥ (Egg)- ၁လုံး (ခလောက်ထားပါ)
၄။ ပါမုန့်ခြောက် (breadcrumb) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၅။ ဂျုံမှုန့် (Flour) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
ရ။ Thyme – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် (အနောက်တိုင်း ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်)
၈။ ကြက်သွန်မြိတ် – အနည်းငယ် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၉။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ အားလုံးကို (၀က်သား၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်ဥ၊ ပါမုန့်ခြောက်၊ ဂျုံမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ Thyme၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ဆား) တို့ကို ဇလုံတစ်ခုထဲ ထည့်ကာ သမအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် မီနီ(အလတ်စားအရွယ်) ၀က်သားပြားတွေ လုပ်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ မီနီ ၀က်သားပြားများကို အညှိရောင်သန်းလာသည်အထိ ကြော်ပေးပါ။
၄။ အညှိရောင်သန်းလာလျှင် ပြန်ဆယ်ထားပြီ ကျန် ၀က်သားပြားများကို ထိုနည်းအတိုင်း ထပ်ကြော်သွားပါ။
၅။ ၀က်သားပြားများ ရပြီဆိုလျှင် Mustard (သို့) Mayonnaise နှင့်တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ်………
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 10 Comments
on December 21, 2010 at 10:13 am | Reply ကိုသားကြီး
Good idea. like it.
၀တ်ရည်ရေ ဆိတ်သားခါးပတ်တို့ ဘာတို့ ချက်နည်းလေးရှိရင် ညွှန်ပါအုံးဗျာ။
on December 29, 2010 at 4:26 am | Reply chowutyee
ကိုသားကြီး ဆိတ်သားခါးပတ် ချက်နည်းက https://getacookrecipe.wordpress.com/2010/05/05/ဆိတ်သားခပတ်ဟင်း/ မှာရေးထားပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါ.. ;D
on December 21, 2010 at 2:11 pm | Reply hmone
it look very yummy will try later
on December 29, 2010 at 4:08 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်စားဖြစ်အောင် လုပ်နော်.. 😛
on December 21, 2010 at 7:00 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ကော်ဖီနဲ့ တွဲပြီး စားချင်တာ ထမင်းနဲ့စားဘူး
on December 29, 2010 at 4:09 am | Reply chowutyee
မချော အဆင်ပြေရင် လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်.. 😀
on December 22, 2010 at 12:17 am | Reply ko nyein
Can make with ready made pork mince?Thanks for your cooking methods.My son like fried pork slice.
on December 29, 2010 at 4:10 am | Reply chowutyee
ready made pork mince နဲ့လည်း လုပ်လို့ရပါတယ် ကိုငြိမ်း။ ဒါပေမယ့် ၀က်သားကို ကိုယ်တိုင်နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီလုပ်တာက ပိုစားလို့ကောင်းတယ်။ ဘာကွာမှန်းတော့ မသိဘူး။ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. Thanks.. 🙂
on December 28, 2010 at 2:47 am | Reply Htet
Thye ဆိုတာ မြန်မာလို ဘာခေါ်လဲ အစ်မ.. စားချင်စရာ ၀က်သားပြားလေးပါ… ဆိတ်သား ကီးမားလုပ်တာ သိရင် တင်ပေးပါဦးနော် အစ်မ…ကျေးဇူးပါ..
on December 29, 2010 at 4:12 am | Reply chowutyee
Thymeကို မြန်မာလို အခေါ်အဝေါ်မရှိဘူး ထက်ရဲ့။ Thymeကို ၀ယ်ချင်ရင် မြိုင်ဟေ၀န်မှာ ရောင်းတယ်။ ဆိတ်သားကီးမား ဆိုတာနဲ့ ဗိုက်တောင် စားလားပြီ။ ၀တ်ရည်တော့ မလုပ်ဖူးဘူး။ အရင် လုပ်စားကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။ ပြီရင် တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်.. 😀
ကိုရီးယား ထမင်းလိပ် (ဂင်ဘော့)